ကံမကောင်းသော နေ့တနေ့ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » ကံမကောင်းသော နေ့တနေ့	21
Posted by ရွှေ မင်း သား on Jul 12, 2012 in Photography | 21 comments
တခါတလေ လေး ဓါတ်ပုံထွတ်ရိုက်ပါတယ်။ လိုက်တင်က မထွတ်တော့ ဘယ်လိုမှ ရိုက်ရ အဆင်မပြေဘူးဗျ…
အဲတော့ လဲ ကြောင် ရေချိုးပြန်တာပေါ့….
kyansitthar101 has written 68 post in this blog.
View all posts by ရွှေ မင်း သား →	Blog
ဦးဦးပါလေရာ says: မှိုင်းမှိုင်းလေးကြည့်ရတော့လဲ
ဆွေးဆွေးလေး ခံစားရသပေါ့ ဓါတ်ပုံဆရာရယ်…
(ဂီဂီ မမြင်စေနဲ့- ထိန်းမရပဲ ဖြစ်သွားမယ်…. :D )
MaMa says: ယူတဲ့အယူအဆကြောင့်ထင်တယ် ပုံလေးတွေက လှနေတာပဲ။
အဲဒါကြောင့် လွင်မိုးက ပြောဖူးတာ…
ဒါ့ပုံရိုက်ရင် အန်ကယ် (Angle) အရေးကြီးတယ်လို့ :D
အလင်း အားမရရင် ပုံကို ဖိုတိုရှော့နဲ့ ပြင်လို့ မရဘူးလား။ _________________________
ကြောင်လေး says: ဘယ့်နှယ်…ဘယ့်နှယ်…..
ကိုယ်ဟာကို အလင်းမရှိလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်မရတာ
mamanoyar says: ကိုရွှေမင်းသားရယ်
Khaing Khaing says: ဟိုနေ့ကပြောတဲ့ ဟိုအကြောင်းဆိုတာ ဒါလေးကိုပြောတာထင်ပရဲ့……..
ကိုမင်းသားတို့အတွေးလက်ရာလေးတွေကတော့ အရမ်းလန်းတယ် …… မန်းလေးလာရင်လည်း ရူခင်းကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့လှလှလေးရိုက်ပေးဦးနော် …….
မမ အညာသူ says: အဲဒါကံမကောင်းတဲ့နေတစ်နေ့တဲ့လား
Ma Ei says: ဒီပုံလေးတွေကို
မောင်ပေ says: အလင်းမရှိတဲ့နေ့
Mလုလင် says: အစ်ကို ဘယ်နားလဲဗျ ..
ရွှေ မင်း သား says: လာခဲ့ လိုက်ပို့ပေးမယ်….
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ပုံလေးတွေလှပါတယ်…
ကံမကောင်းသောနေ့ တစ်နေ့ အဖြစ်…
Yin Nyine Nway says: ခေါင်းစဉ် ပြောင်းလိုက်ပေါ့…. မိုးအုံ့သောနေ့တစ်နေ့လို့ :D
ကိုရင်မောင် says: ရွှေမင်းသားရေ ပုံတွေမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်
Mလုလင် says: ပါးစပ် ရာဇ၀င် မှာတော့ လူသားစားတဲ့ ဘီလူးတွေကို ဆုံးမ ဖို့ လို့ ပြောတာပဲ အစ်ကိုရေ။
ရွှေ မင်း သား says: ကျနော်ပုံတွေ မဆိုးပါဘူး ၊ ဆိုးလို့ လဲ မရဘူးလေ.. ကျနော်က ဆိုးရင် တုတ်နဲ့ ရိုက်ပစ်တာ။..
မနုတ်သီဟ ဖင်နှစ်ခွ ရာဇ၀င်တော့ ကျနော် လဲ မသိဘူး ခင်ဗျ။
သိတဲ့သူများ ဖြေပေး စေချင်ပါတယ်.
မစ္စတာ တောက်တဲ့ says: ဟုတ်ပါတယ် ..
ပုံတွေ မဆိုးဘူး .. ကောင်းတယ် ..
ဒါပေမယ့် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ပုံတွေ မရခဲ့လို့ ကံမကောင်းသော နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သွားတာပေါ့နော့ … :D
ကိုယ်တော့ရဲ့ ပုံတွေကို အားပေးသွားပါတယ် …
သုံးပုံမြောက် ပုံစံကိုတော့ ကျုပ်အနေနဲ့ တအားကြီးကို အကြိုက်တွေ့မိပါကြောင်း …
snow white says: ကိုရွှေမင်းသားက ဓာတ်ပုံရိုက်ချက် ကတယ် မိုက်တယ် တကယ်ကိုကောင်းတယ် အားပေးတယ် ဆက်လက် ရိုက် သမျှ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပါအုံး အကြံပေးတာနော် ဘယ်မြို့နယ် ဘယ်နားပေါ့လေ နာမည်လေးတွေ ထည့်ပေးပါနော် ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် အကြံပေးတာနော် ပြစ်တော်မမြင်ဘဲချစ်တော် ၀င်ပေးပါနော် ရွာကို ချစ်လျှက် ရွာသူရွာသားအပေါင်း ကို ခင်မင်လေးစားလျှက် စနိုး…..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1740
Shwe Tike Soe says: အော်ငါ့သယ်ရင်း မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာ အခုတော့ သူအိမ်နားတင်ပတ်ရိုက်နေပြန်ပေါ့လား………ဟဟဟဟ
အဲဒီနေရာ ဒီအတိုင်းသွားရင် သိပ်မသိသာပေမယ့် သယ်ရင်းဓာတ်ပုံထဲမှကြ သာယာသားဟ နော်..ဒါပညာ ပညာ………
ရွှေ မင်း သား says: တို့နားမှာလဲလှတာလေးတွေရှိပါတယ်။ သယ်ရင်းလဲ အဲဒီနေရာကို ခဏခဏ သွားခဲ့ တယ်ထင်တယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ သွားတာလဲဟင်။
စနိုး လေး ရေ
ပြစ်တော်မမြင်ဘဲ ချစ်တော် ဝင်ပေး ပါတယ်။ စနိုးချစ်သလို ကျနော်ကလဲ ချစ်ပါတယ်။ ရွာကိုပြောတာနော်
etone says: ကိုရွှေမင်းသားရေ .. ကံမကောင်းတဲ့ နေ့မို့လား မသိဘူး .. ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်ရပါတယ် … ။
ကံကောင်းတဲ့ နေ့များသာဆိုလျှင် .. ကိုယ်တိုင်တောင် အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားသလို ခံစားမိသွားမလား … မပြောတတ်တော့ဘူး .. လက်ရာတွေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျို့ …….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8225
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲဒါမင်းငါ့ကိုမခေါ်ဘဲ တစ်ယောက်ထဲလစ်လို့။